Safaaradda Kenya ee Muqdisho oo la joojiyay dhismaheeda. – Balcad.com Teyteyleey
Mrs.Amina Maxamed Wasiirka arimaha dibada dalka Kenya ayaa ka hor sheegtay Barlamaanka dalkeeda in amni darida ka jirta Soomaaliya ay ku qasabtay inay hakiyaan dhismihii safaradooda ee magaalada Muqdisho.
Wasiirada rayaa u sheegtay gudiga difaaca iyo arimaha dibadda ee Barlamaanka dalkaasi in mashruuca dhismaha safarada Kenya soo bilaabmay bishii Agust sanadkii 2015-ka waxana lagu waday in la dhamaystiro dhamaadka 2016-ka.
Iyadoo ka hor hadlaysay xubnaha Barlamaanka waxa ay tiri
“Gaabis ayaa ku yimid inaynu dhisno safaaradeeni Muqdisho,kadib markii ay sii kordheen arrimaha lidiga ku ah ammaanka caasimada Soomaaliya, balse waxaan idin xaqijinayaa in la dhamaystiray 35% dhismaha safarada” ayay tiri Wasiirad Aamina.
Bisha March 2014-kii ayay ahayd markii ay Kenya sheegtay inay qorsheenayso dib u furashada safaradoodi Soomaaliya si ay u xoojiso xiriirkeedi Diblomasiyadeed ay Soomaaliya la leedahay.
Dhanka kale Safarada Kenya ee Soomaaliya ayaa si KMG uga howlgalaysay Nairobi inta aysan ku soo dhiiran dhowr safaaradood inay ka shaqeeyan Soomaaliya kuwaa oo degay xarunta Xalane oo taliska ugu weyn ee Ciidanka AMISOM ah.
If you don’t want to spend a pretty penny for your robaxin, just buy it right now for 0.59 USD only!